Ny lalao malaza indrindra ho an'ny retrogamers | Vaovao IPhone
Ny lalao video voalohany dia nihanazava tamin'ny taona 70, fa ny milina arcade no izy nampalaza azy ireo tamin'ny taona 80 sy 90 izy ireo. Ny fivoaran'ny lalao video dia fantatry ny rehetra, tsy mino aho fa misy sisa tavela izay mbola tsy nilalao Nintendo, Play Station, XBox, Wii, sns.
Ho an'ireo tia an'ireny horonan-tsary voalohany ireny ireo finday avo lenta indrindra dia nitazona sy namboarina, eto aho mitondra anao ny sasany amin'ireo izay narahina indrindra, ireo izay nantsoina ankehitriny mpilalao retro.
4 Trilogy Dragon Double
6 Matoatoa'n Goblins
7 Mega lehilahy x
10 Andrianan'i Persa
12 Sonic: The Hedgehog
14 Ny tsiambaratelon'ny nosy gidro
Lalao video arcade novolavolain'i Taito in 1986. Miorina amin'ny Atari Breakouts tamin'ny taona 70. Ny mpilalao dia mifehy sehatra kely, fantatra amin'ny anarana hoe «Spaceship Various", inona manakana ny baolina tsy hivoaka ny faritra filalaovana ka mahatonga azy hiakatra. Eo an-tampony dia misy «brickwork"Na"kilalao miendrika biriky«, Izay manjavona rehefa voakasiky ny baolina. Rehefa tsy misy biriky tavela intsony dia mihetsika mankany amin'ny ambaratonga manaraka ilay mpilalao, izay miseho modely hafa ny sakana.
Lalao video vidéo fiara namboarina tao 1997 izay niavaka tamin'ny fampidirana a ampahany betsaka amin'ny herisetra amin'ny maodin-dalao. Ny iraka lehibe amin'ny lalao dia ny famitana ny hazakazaka na ny fanapotehana ireo fiara mifanohitra, na izany aza, famporisihana ny mihazakazaka mpandeha an-tongotra. Tamin'ny fotoan'androny dia niaritra fanakianana mahery vaika izy izay nitarika azy ho any amin'ny toerana ambony fivarotana.
Ny lalao dia mifototra amin'ny sarimihetsika avy amin'ny talen'ny 1975 Paul Bartel, Fahafatesana hazakazaka 2000, izay kintana an'i Sylvester Stallone y David carradine.
Navoaka tamin'ny kinova arcade in 1999 ary ho an'ny Dreamcast tamin'ny taona 2000 dia taty aoriana niova ho an'ny PlayStation 2 sy GameCube consoles ary ho an'ny PC amin'ny taona 2001.
Crazy Taxi Classicmaimaim-poana
Ny mpilalao dia afaka misafidy iray amin'ireo mpamily taxi efatra (Axel, BD Joe, Gena ary Gus) mankany raiso ny olona dia alao izy ireo izay asehon'ilay zana-tsipìka fitantanana alohan'ny fotoana. Mandritra izany dia afaka mahazo vola ianao amin'ny fanaovana fikafika, toy ny fifandraisana amin'ny fiara hafa.
Trilogy Dragon Double
Ny saga dia natomboka tamin'ny arcade niaraka tamin'ny Dragon Double avy tany 1987. Lalao video mahazatra an'ny Beat 'em up genre, novolavolain'ny Technos Japan tamin'ny voalohany. Nahafinaritra ny lalao fitaomana sarimihetsika haiady, indrindra miaraka amin'ny Bruce Lee, toa ny Operation Dragon; ary toerana aorian'ny apokaliptika miorina amin'ny anime Fist of the North Star.
Trilogy Dragon Double€ 2,99
Ilay lalao saga dia kintana kambana Billy sy Jimmy Lee, izay mpianatra amin'ny artista haiady noforonina antsoina hoe Sōsetsuken, miaraka amin'izay dia miady amin'ny fahavalo sy mpifanandrina isan-karazany izy ireo. Dragon Double nanana tohiny sy kinova maro tamin'ny konsole samihafa. Misaotra ny lazan'ny saga, nisy ihany koa ny andiam-pahitalavitra mihetsika sy ny sarimihetsika.
Lalao video an'ny mitifitra olona voalohany (FSP) ao amin'ny 3D, novolavolaina sy nozarain'ny 3D Realms tao 1996.
Mifanohitra amin'ireo lalao video amin'ilay karazana nialoha azy, ao amin'ny Duke Nukem 3D hitanao a ambaratonga maro samihafa, izay misy habaka malalaka sy habakabaka manomboka amin'ny arabe mankany amin'ny tanàna rendrika na tobin-habakabaka. Ankoatr'izay, ireo ambaratonga ireo dia tsy manana fivoarana mitanjozotra tanteraka, be dia be ny tampoka sy ny crannies tena manintona ho an'ny multiplayer.
Nadika hoe Ghost sy goblins, dia lalao video arcade platformer noforonin'i Capcom on 1985. Ny mpilalao dia mifehy a Caballero, antsoina hoe Sir Arthur, izay manana fahaizana manipy lefona, sabatra, fanilo, famaky ary fitaovam-piadiana hafa izay tsy maintsy ilainy mandresy ny zombie, ny demony ary ny zavaboary mahatsiravina hafa mba hanavotana andriambavy.
Mega lehilahy x
Lalao video novolavolaina tamin'ny 1993 nataon'i Capcom, no lalao video voalohany an'ny ny andiany Mega lehilahy x y noforonina indrindra ho toy ny vato fiakarana ho fandrosoana avy amin'ny lalao video an'nyMega Man manomboka amin'ny NES ka hatramin'ny Super Nintendo.
Ny teny filamatra dia hamafana ny efijery 8 amin'ny lehibeny avy (fahazoana ny fitaovam-piadiany ho fahefana), avy eo handefasana efijery fanampiny 3 na 4 izay hitondra any amin'ny sefo farany. Isaky ny efijery tsirairay dia misy zavatra miparitaka, izay amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia azo avy amin'ny hery azo avy amin'ny efijery teo aloha.
Andian-dalao horonan-tsary nataon'i karazana hazakazaka sy basy navoaka voalohany tao amin'ny milina arcade Neo-Geo sy lalao konsole noforonin'i SNK. Tena ny lalao fanta-daza noho ny vazivazy sy ny fanentanana nataony tanana, izay no antony iheverana azy ho iray amin'ireo andiany tsara indrindra sy miavaka indrindra amin'ny karazany.
METAL SLUG 1€ 2,99
Ny tantara dia nitranga tamin'ny taona 2008, izay niantsoan'ny vondrona mitam-piadiana Peregrine Falcon Squad (Peregrin falcons) tsy maintsy manakana ny fanandramana fanonganam-panjakana nokendren'ny Jeneraly Morden, mpitarika ny Tafiky ny mpikomy ary mpanohitra ny andiany voalohany.
Izy io dia lalao video arcade noforonin'ny mpamorona lalao video Toru Iwatani an'ny orinasa Namco ary nozaraina tamin'ny fiandohan'ny taona 1980. Nanjary tranga manerantany tamin'ny indostrian'ny lalao video izy io, nanjary nanana ny Record Guinness ho an'ny lalao video arcade mahomby indrindra Mandrakizay miaraka amina milina 293.822 amidy tamin'ny 1981 ka hatramin'ny 1987.
Ny titre klasika an'ny toetra mihinana matoatoa mavo, rehefa mamakivaky ny maze izy.
Navoaka voalohany ho an'ny Apple II tao 1989. Ny tantara dia nitranga rehefa lavitra ny fanjakany i Sultan izay mitarika ady. Fotoana mety hitrangan'ity vizier Jaffar ratsy fanahy ity hanandrana haka fahefana. Mba hanaovana azy mitazona ny andriambavy. Ny mahery fo dia tanora adventurer avy any amin'ny tany lavitra, ary ny tena fitiavana ny andriambavy. Saingy natsipy tany amin'ny tranomaizina tao amin'ny lapa izy ary ankehitriny tsy maintsy mandositra alohan'ny fahatanterahan'ny fotoana nomen'i Jaffar amin'ny andriambavy, manapa-kevitra raha hanambady azy na hanafaka azy.
Ny lalao dia misy a fomba fijery roa-refy. Miseho amin'ny fomba fijery ny hetsika. Tsy misy horonan-tsary (mikorisa).
Izany no fitohizan'ny Street Fighter. Lalao voalohany amin'ity andiany ity Street Fighter hahatratrarana laza sy mpamorona ny fisehoan'ny lalao video ao amin'ny karazana ady. Novolavolan'ny orinasa Capcom. Niseho tamin'ny arcades tamin'ny volana martsa 1991 any Japon, ary avy hatrany ho an'ny sisa amin'izao tontolo izao.
endri-javatra Tarehintsoratra 8 hisafidianana, sefo farany 4 ary fiafarany hafa ho an'ny mpilalao tsirairay. Ho setrin'izany dia nanana fifehezana izy izay, toy ny teo alohany, dia mampiasa fitambarana lever sy bokotra 6 hanaovana fanafihana manokana mandritra ny tolona, ​​toy ny manipy afo na «dragonpunch»Ka nalaina tahaka tamin'ny lalao nandimby azy ireo.
Amin'ny taona 1989 ny orinasan-dalao video Nintendo namoaka ny lalao video Super Mario Bros, nanjary nalaza be ity lalao ity ka voatery namorona toetra i Sega hifaninana amin'ny Nintendo, ka noforonina i Alex Kidd, izay tsy fahombiazana satria tsy nahatratra ny andrasan'ny mpankafy. Ka ilay mpamorona lalao video Yuji naka namorona ny toetra Sonic ny sokina ary mandefa ilay lalao video eponymous ao amin'ny 1991.
Sonic the Hedgehog ™ Classicmaimaim-poana
Hazakazaka amin'ny haingam-pandeha amin'ny alàlan'ny faritra mahazatra 7 miaraka amin'i Sonic the Hedgehog. Mihazakazaha mihodina amin'ny tadivavarana raha mbola mahazo Rings ianao ary mandresy ny fahavalonao amin'ny iraka ataonao mba hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny Dr. Eggman ratsy fanahy.
Tetris (Rosiana: Те́трис) dia lalao video piozila noforonina tamin'ny alalàn'ny fandaharana Alexey Pazhitnov, Navoaka tamin'ny 06 Jona, 1984. Ny lalao dia naka ny anarany avy amin'ny prefika tarehimarika grika Tetra, satria ny singa rehetra amin'ny lalao, fantatra amin'ny anarana hoe Tetrominos, dia misy fizarana efatra.
Ny mpilalao dia tsy afaka misoroka ny fianjeran'ny tetrominos, fa afaka manapa-kevitra ny fihodinana anjara (0 °, 90 °, 180 °, 270 °) ary aiza no tokony hianjera. Rehefa tsipika marindrano Vita, nanjavona io tsipika io ary ny sombintsombiny rehetra etsy ambony dia midina amina toerana iray, manafaka ny toerana filalaovana ary manamora ny asa fametrahana sanganasa vaovao.
Ny tsiambaratelon'ny nosy gidro
Izany dia Aventura Tabilao Fantatr'i LucasFilm Games en 1990 izay anaovan'ny tantara an-tsarimihetsika piraty azy, mamorona tontolon'ny hatsikana izay nanova ny endriny.
Ny lalao dia manomboka any amin'ny nosy Karaiba Mêlée, toerana tovolahy iray antsoina hoe Guybrush Threepwood te-ho jiolahin-tsambo. Mba hanaovana izany dia mitady ireo mpitarika jiolahin-tsambo nanankina azy izy olana telo lasa jiolahin-tsambo: resy i Carla, tompon'ny fefy, amin'ny ady amin'ny sabatra sy ompa; mangalatra sarivongana ao amin'ny tranon'ny Governora; ary mahita harena milevina.
Lalao video an'ny mitifitra olona voalohany izay nampalaza ny karazana ho an'ny PC. Id Software no namorona azy ary nozarain'i Apogee Software tamin'ny volana Mey 1992. Ity lalao ity dia mpisava lalana amin'ny karazany.
Ny mpilalao dia William J. Blazkowicz, un mpitsikilo fanandramana amerikana afa-mandositra ny trano mimanda nazi gadra izay. Ny trano dia manana efitrano miafina maro be misy zava-tsarobidy, sakafo hohanina ary fitaovana fanampiana voalohany, ary koa karazana fitaovam-piadiana sy bala, izay hanampy ny mpilalao hahatratra ny tanjon'izy ireo.
Ho fanamarihana ho an'ny mpilalao dia azonao atao ny manamarina ny lisitry ny lalao video be mpividy indrindra ao la VGChartz Game Database
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny lalao malaza indrindra ho an'ny retrogamers
alberitotu dia hoy izy:
Ary mirona ho "lafo" izy ireo manararaotra ny alahelontsika !! Ratsy ratsy
Mamaly an'i Alberitotu
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho ... fa tsy afaka nanohitra ny fananako mihoatra ny iray ihany koa amin'ny iPhone.